Xasan Sheekh Maxamuud: Anaga Qaran Dumis ma nihin! – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud, ayaa qaba in mid ka mid ah dhibaatada Dowladnimada Soomaaliya haysta ay tahay ineysan jiilka hadda iyo kuwii ka horeeyey waxba ka aqoon Nidaamka Xisbiyada Badan ee siduu sheegay u ah aasaas dimuquraadiyadda iyo nuuca dowladnimada ay Soomaaliya raadineyso.
“Dalkan laga soo bilaabo 1969, 21-kii sano ee ay Dowladdii Militariga ahayd kasoo jirtay iyo 28 sano oo hadda la marayo, oo 40 sano ku dhawaad ah, dhaqan xisbi kama jirin, lagamana aqoon” ayuu yiri Xasan Sh. Maxamuud. Waxa uu sheegay in dadkii joogay waqtigaas ka hor ay u badan yihiin iney gaboobeyn ama aysan nooleyn. “Marka, in dadka wacyigooda xisbiyada uu hooseeyo wax caadiya waaye” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Sababtaas darteed ayuu Madaxeweynihii hore, Mudane Xasan Sheekh, uga dhigay cillad in ay dad badan oo, sida uu sheegay, ay ugu horeeyaan jiilka maanta ay dhibeyso in ay arkaan mucaarad iyo cid dowladda dhaliileysa. “Dadka mucaaradnimadu wax xun ayey la tahay” ayuu yiri Xasan Sheekh. “Laakiin, mucaaradnimadu waa wax san, xisbiyaduna nidaamka dowladnimadey ka mid yihiin” ayuu hadalkiisa raaciyey.
Warkan, oo uu Madaxweynihii hore siiyey Kalfadhi, waxa uu Xasan Sh. Maxamuud ku muujiyey sida ay u dhibtay in mucaaradka loogu yeero Qaran Dumis. “Ra’yiga dowladda haddii uu qof meel kala gaabto oo uu yiraa maya, sidaas sax maaha ee sidaanaa sax ah, macnaheedu maaha qaran dumis inaan nahay iyo qaran diid in la yahay” ayuu Xasan ku yiri Kalfadhi. “Soomaaliya qurxoonaa la wada rabaa, laakiin wadada loo kala maraayaa lagu kala duwan yahay” ayuu ku daray hadalkiisa
Xasan Sh. Maxamuud, oo hadda ah Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, waxa ku talinayaa in wacyiga iyo fahamka ay dadku ka hasystaan Dowlad Wanaagga kor loo qaado, arrintaas oo uu sheegay in ay tahay masuuliyad wadareed, sida uu hadalka u dhigay. Doorka ugu weyn ayuu sheegay in ay warbaahinta leedahay, xisbiyaduna ay muhiim u tahay in ay kor u qaadaan wacyiga siyaasiga ah ee dadka, iyada oo ay dowladduna masuuliyaddaas wax ka leedahay, sida uu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sh. Maxamuud.